Iyo Nhoroondo uye Shanduko yeMotokari Logos Martech Zone
Iyo Nhoroondo uye Evolution yeMotokari Logos
Wednesday, April 29, 2015 China, April 30, 2015 Douglas Karr
Kuona kunoonekwa kwakakosha kupfuura vanhu vazhinji vanotenda. Chiratidzo hachimiriri mucherechedzo chete, chinowanzove nezvakawanda zvinoreva uye chinogona kana kutsvaga nhoroondo yekambani. Makambani mazhinji anopokana nekuchinja logo. Vanogona kunge vakashandisa mari yakawanda yekumaka, kana ivo vari kunetsekana nemutengo uye nesimba rinodiwa pakudzokororazve.
Ndiri mutendi akasimba mukugadzirisa kune logo yako kuti igare iine chekuita nekukura uye kukura kwekambani yako - pamwe nekuichengeta yazvino uye inoenderana nevateereri vako. Kana paine imwe indasitiri uko logo chinodhura - indasitiri yemotokari. Marogo haasi chete pazvinhu zvese zvechibatiso, anowanikwa kwese pamotokari yako.
Tarisa tarisa nguva inotevera paunopinda mumotokari yako… pahodhi, marambi emusuwo, mataiti epasi, girovhosi, trunk, maekisero evhiri, kunyangwe muchikamu cheinjini. Uye ikozvino neakakwirira resolution ekuratidzira, ivo vanomiririrwa manhamba zvakare. Yangu inotenderera ichitenderedza uye inobhururukira muchiratidziri.
Kana iwe ukaongorora aya marogo, iwe uchaona kuti ivo vanongogara vaine rumwe rudzi rwechitarisiko kutaridzika uye kunzwa kwavari. Ini ndinofungidzira kuti icho chinenge chiri chinodiwa sezvo ivo vakavakirwa mumotokari yega yega. Chinyakare logo vagadziri vanowanzovenga izvo nekuti ivo vaimbove vachiona kuti marogo anotaridzika zvakanaka pane nhema & chena, pane fax muchina, kuenda kuburikidza kusvika kumadziro kupenda. Mazuva iwayo ari kumashure kwedu, zvakadaro.
Sezvo marogo achiramba achichinja, handina chokwadi chekuti vanozomboenda zvizere ... asi ndinofunga vanozoenderera nekudzika uye hukuru kwavari. Kunyangwe magadzirirwo akati sandara aive nematanda ekudzika.
Inosanganisirwa mune infographic ndiAlfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugot, Renault, Škoda, Vauxhall, uye Volkswagon. Ndiri kuwedzera Chevrolet mushure meiyo infographic yeavo vedu kune rimwe divi redziva.
Tags: alpha romeoalfa romeo logoaston martinaston martin logoaudiaudi logoauto marogoBMWbmw logocadillaccadillac-logomutengesi wemotokari wongororofiatFiat logofordford logologo shandukologo nhoroondomazdamazda logoNissannissan logoPeugeotpeugot logorenaultRenault logochigarochigaro logoskodaskoda logovauxallvauxhall logoraigandavolkswagon logo
Ndezvipi zvinhu zvinoita kuti ubudirire pasocial media danho?
Chirahwe: Zvemukati Zvemukati Gadzira Yakagadzirwa Nyore